दुबै मृगौला फेल भएका गुल्मीका बसन्त कुँबरले रुदै ज्यान जोगाइदिन आग्रह गरेपछि…(भिडियाे) – Fewa Times
दुबै मृगौला फेल भएका गुल्मीका बसन्त कुँबरले रुदै ज्यान जोगाइदिन आग्रह गरेपछि…(भिडियाे)
प्रकाशित मिति: February 6, 2018 9:42 pm
काटमाडौँ – “दुखीको घरमा मात्र तेरो बाँस हुने भए हे इश्वर ! मलाई अझ दुख दे” भन्ने उद्धरण सम्झें। हुन पनि यो कलि युगमा जो सोझो, इमानदार, सहयोगी र शिलस्वभावको हुन्छ, उसैलाई अनेकौ समस्या आइ पर्छन् ।अहिले ठिक तेस्तै भयो, मदाने गाउँपालिका वडा नं. ४ म्यालपोखरी काभ्राका एक जना युवालाई । उमेरले भर्खरै ३४ बर्ष पुगेका बसन्त कुँवर साच्चै नाम मात्रका वसन्त होइनन् उनको नाम सङ्ग तुलना गर्ने अनेकौ विशेषता भएका वसन्त आज मृत्यु सङ्ग लडिरहेका छ्न।
पेसाले गाडी चालक अत्यन्तै मिलनसार, हसिलो, सहयोगी बसन्तले सयौ समस्याहरु झेल्दै “सेवा नै धर्म हो” भन्ने अभिप्रायका साथ सानो उमेरमै सबारी चालकको रुपमा काम गर्दै आए। सयौ मानिसहरुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएर, कसैलाई साथमा पैसा छैन भने भाडा नलिएर, हाँसीहाँसी सहयोग गर्ने वसन्त आज उनैलाई सहयोगको आबस्यकता परिरहेको छ।
भर्खर भर्खर तम्घास सिमल्टारीपुर्कोटदह मोटरबाटोको सागुरो ट्र्याक मात्र खोलिदा सबारी चालक किरण कुँवर लगायतका अन्य चालक सहित उनी पनि यात्रुको इच्छानुसार सेवामा जुटिरहे ।
दैबले ठगेका बसन्तले सानै उमेरमा दैबले आमालाई गुमाउनु पर्‍यो। अब हामी कल्पना गरौँ आमा बिनाको उनको जिन्दगी कस्तो भयो होला ? र उनको जीवनमा कस्ता खालका बाधा अड्चन आइ परे होलान् ?
पैत्रिक सम्पत्ति र आर्थिक अबस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका बसन्तको जीवन यापन गर्ने माध्यम भनेकै गाडी चलाउनु थियो। उनी मात्र नभई उनी प्रती आश्रीत ६ जनाको परिवार छ। २ वटा नाबालक, १ श्रीमती, १ बहिनी र १ आमा (पछिल्ली) बसन्त बिनाको जिन्दगी अधुरो मात्र होइन, अपुरो नै रहनेछ ।
हिजो सबैको सहयोगी पात्र बनेका बसन्त लाई आज तपाई हामी धेरैको सहयोग उनलाई चाहिएको छ। बिगत केहि दिन देखि बिरामी परेका बसन्तलाई समयले धोका दिएछ। उनको २ ओटै मिर्गौला काम नलाग्ने भैसकेको कुरा चिकित्सकले प्रमाणित गरिसकेका छ्न।
उनी अहिले काठमाडौको महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु सङ्ग लड्दै छटपट्याई रहेका छ्न। दुबै मिर्गौलाले काम नगर्ने भए पछि मिर्गौला नफेरे सम्म उनको जीवन असाध्यै अप्ठ्यारोमा छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनको उपचारका लागि ३०–३५ लाख सम्म लाग्ने भने पछि उनका शुभचिन्तकहरु अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेका छ्न।
उनको सम्पुर्ण सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पनि २–३ लाख नपर्ने र उनको जिम्मेवार अभिभावक पनि नभएकोले हामी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।
हुन त उनको बारेमा हजार पानाको डायरीमा लेखे पनि कम हुन सक्छ। मैले उनको बारेमा छोटकरीमा वास्तविक जीवनको यथार्थता लाई मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ। उनको बारेमा म भन्दा पनि हजुरहरु नै बढी जानकारी हुनुहुन्छ।
आदरणीय नेपाली बुवाआमा,दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरु कालले त कसैलाई पनि छोड्ने छैन तर पनि सास रहुन्जेल आस गर्नु नै मानवीयता हो। भोलि कसलाई के पर्छ , कसैलाई थाहा नै छैन। यो जिन्दगी भनेकै २ दिनको हो। तपाईं हाम्रो सानो आर्थिक सहयोगले उनले पुनर्जीवन पाउन सक्नेछन् । त्यस्ले हजुरका सन्ततिलाई समेत फलिफाप हुनेछ भन्दै कृपया “बसन्त बचाऊ” अभियानमा सहभागी हुनुहोस् आफू सक्दो सहयोग गर्नुहोस् र पुण्य कमाउनुहोस भन्ने आग्रह गर्दछु।
साथै सहयोग दाताले उहाकी श्रीमती तारा कुवँरको नम्बरमा global ime bank ko account no. 7007010004209 सम्पर्क गर्नुहोला ।
थप जानकारी को लागि तारा कुवर (श्रीमती)